I-VILLA BELLAVISTA ichibi lokuqubha elijongene neLake Garda 8 px
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguMaria Teresa Olivari
Ikhowudi ye-CIR 017201-CNI-00027
Kuba abathandi ukuchulumacha, villa ibekwe kwindawo esentabeni unako i ingane omangalisayo Ngenxa Gulf of entla (5 km), i-Rocca banandiphe ukusuka apho di Manerba d / G, the Peninsula Sirmione phezulu ukuze ubone zonke kwayo ubude luNxweme lwaseVenice lweChibi.Ivilla yonke, iiterraces, igadi enebarbecue kunye nendawo yedama lokuqubha ZETHU ZETHU ZETHU ZETHU ZOKUSETYENZISWA NGOKUKHETHEKILEYO ZETHU. Ukuphumla kunye nobumfihlo ngamanqaku aqinileyo eVilla Bellavista.
I-Villa Bellavista yamkela zombini iintsapho kunye nabantwana kodwa kunye nezibini kunye namaqela ezihlobo, isakhiwo sinendlu enkulu ephindwe kabini enegumbi lokuhlambela langasese, ishawa kunye nendawo yokuphumla kunye nebhafu yaseTurkey (umrhumo), igumbi lesibini kunye eliqaqambileyo elinesibini kunye negumbi lokuhlambela labucala elineshawa. kunye ne-bidet, igumbi lokulala elineebhedi ezimbini ezingatshatanga. Kuwo omabini amagumbi okulala amabini, ngesicelo kunokwenzeka ukongeza iibhedi okanye iibhedi; kwindawo yokuzivocavoca ekufuphi ne-master bedroom suite ungahlala ulungile ngelixa uncoma umbono omangalisayo wechibi. Kwigumbi lokuhlala elikhulu neliqaqambileyo uya kufumana ibhedi yesofa ekhululekile. Ikhitshi elikhulu lifakwe ngokupheleleyo ifriji, i-oveni, imicrowave, isitya sokuhlamba izitya, iketile. Kwigumbi lokuhlala, iitafile ezimbini zokutyela ezinkulu apho unokonwabela ukutya kwakho ngelixa usenziwa ngumbono onika umdla ophefumlayo; kwigumbi lokuhlala uya kufumana ibhedi yesofa ekhululekile.
INDAWO YOKUQUBHA YEPALI YOKUSETYENZISWA NGOKUKHETHEKILEYO KWEENDLEKILEYO ibekwe kwithafa elikhulu elijonge echibini, ithanda ukuba bucala ngokupheleleyo kwaye ixhotyiswe ngeendawo zokuhlala ezitofotofo zelanga; Kwakwitrasi enye ungasebenzisa ibarbecue xa uzogrisa. Kwigumbi lokuhlambela langaphandle, uphelele ngeshawari onazo uya kufumana indawo yokuhlamba.
Isakhiwo sonke sihlanganiswe nge-wi-fi yamahhala. Indawo yokupaka yangaphakathi iyafumaneka kubathengi.
Le propati ifumaneka e kwindawo kakhulu uPetros zazihamba, nje imizuzu embalwa ngemoto kwidolophu entla kunye amalwandle ezisemagqabini Lake Garda kunye ezinika ezininzi kuquka Vittoriale degli Italiani, maqula wobushushu ka Sirmione, Campione ngenxa abathandi umoya. Begudle kunye neCampiglio yabathandi beentaba. Kufuphi uya kufumana iikhosi zegalufa, iindlela zokuhamba ngebhayisikile kunye neepaki zokonwabisa abantwana (iGardaland, Sealife, Canevaworld).
Ipropathi ibekwe kwindawo eyaziwa ngokuba yindawo yasehlotyeni yabakhenkethi abaninzi bangaphandle nabangaphandle, iikhilomitha ezimbalwa ukusuka elunxwemeni. Uhola wendlela ye-Desenzano del Garda kunye ne-Terme di Sirmione ziikhilomitha ezili-15. Isikhululo seenqwelomoya saseVillafranca (Verona) yimizuzu engama-45 ngemoto ukusuka kwindawo yokuhlala.
Isikhululo seenqwelomoya saseOrio al Serio (Bergamo) yimizuzu engama-40 ngemoto ukusuka kwindawo yokuhlala.
Umbuki zindwendwe ngu- Maria Teresa Olivari
Ndiya kufumaneka kwiindwendwe ukuhanjiswa kunye nokuqokelela izitshixo kwaye nangayiphi na imeko ngomnxeba nangaliphi na ixesha.
UMaria Teresa Olivari yi-Superhost
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- VILLANUOVA SUL CLISI